kariya, Short Description Order Job / Functions Oo Sample Xisaabtanka - JobDescriptionSample.org
Home / Uncategorized / kariya, Short Description Order Job / Functions Oo Sample Xisaabtanka
kariya, Short Description Order Job / Functions Oo Sample Xisaabtanka
Yacquub June 28, 2016 Uncategorized Leave a comment 642 Views
Samee iyo kariyo toorder cunto badan oo kala duwan oo u baahan oo keliya muddo udiyaarin deg deg ah. Codsiga waxaa loo qaaday by may ka dukaamaysanayay iyo dalab macaamiisha ee miisaska ama counters.
Career Skills Horudhac ah
cuntooyinka-diyaarinta Nadiifi, goobaha shaqada, iyo counters ama loox.
Sidaas daraaddeed in walxaha si wadajir ah u bixiyeen waxaa lagu sameeyey wakhtigii waa isku mid barnaamijka focus on codsiyada,.
Solay iyo shiil cuntooyinka-sida sida shiilan farcankaaga, iyo canjeelada canjeelada.
Tixgeli amar ka dukaamaysanayay iyo kariyo waxyaabaha lagama maarmaan in daqiiqado diyaarinta kuwa kooban, oo ku salaysan baahida macaamilka.
BBQ iyo qaadan hamburgerka ama hilib lo'aad oo dheeraad ah, oo ay ku jiraan garoocad iyo bisteeki.
Meals isagoo, kaalinta by codsiyada dhameystiran ka alaabta uumiga saxamada iyo dukaameeysatada adeegta miisaska ama counters.
Maamleedna sahay jikada, shaandheyn cunto, iyo stamps waqtiga iyo taariikhda on cuntada ee qaboojiyaha.
Naqdaan shaqo diyaarinta cuntada, tusaale ahaan karinta rootiga ama macmacaan, samaynta hilib, guud ahaan suugada ama maraqa, ismaris dhismaha, iyo diyaarinta kafeega ama shah.
Dhammayn raad nadiifinta caadiga ah ee meelaha wax cunaya oo guriga.
Iibso iyaga maalgashi ku hayayaasha iyo bixisaa.
Aqoonsiga waajibaadka, oo abuura beddesho ama abuuro rogi dhaqaaqdo sida muhiim ah.
Work raad Qualification
Akhrinta content qaab Aqoonta-fahmidda iyo weedho ee DoCS shaqada ku jira ee la xiriira.
Active-Dhageeysi-To waxa ay dadka kale la yidhi bandhiga dareenka oo dhan, waqtiga iyo tamarta si ay u fahmaan faahfaahin ka qaadan la macmalay, weeydiin weydiimo sida ku haboon, oo aan mesmerizing at jeer in ay yihiin aan habboonayn.
Publishing-hadley wax ku ool ah qoraa ma aha sida aan habboonayn ee baahida dhagaystayaasha.
Xariirinta la-hadalka dadka kale si ay ula wadaagaan xogta si guul leh.
Xisaab-Dalbashada xisaabta si loo xaliyo arrimaha.
Research-Isticmaalka xeerarka caafimaadka iyo hababka si uu u xaliyo dhibaatooyinka.
Fikirka in uu yahay muhiim-Isticmaalka macquulka ah oo ku fikiray inaan ku arko faa'iidooyinka iyo duleella u ah wajiyadii, gunaanad ama beddeli kale oo ay dhibaatooyin ka.
Active Learning-ogyahay saamaynta macluumaadka cusub kasta oo go'aan-qaadasho ka iman kara iyo dhawaan xalinta dhibaatooyinka iyo.
Barashada Qaababka-shaqaalayn iyo qaadaaya farsamooyinka instructionORinstructional iyo daaweynta ku haboon tababarka gaarka ah ee xaaladda ama marka fahamka waxyaalaha ku jira oo cusub.
waxqabadka Monitoring-CheckingORDiscovering naftaada, dadka kale ee, ama shirkadaha in ay curiyaan uqaadineed ama ka fiirsan falalka sixid ah.
Social Perceptiveness-In ka dhawrsada reactions othersI iyo fahmidda sababta ay u dhaqmaan maxaa yeelay, waxay sameeyaan.
falalka Dexterity-Beddelidda la xiriira kuwa kale’ tallaabooyinka.
dadka kale Salesmanship-dhab u beddeli karo falalka ama garashadoodii.
Gorgortanka-Gudbinta dadka kale si wadajir ah oo isku dayaya in ay heshiiyaan kala duwanaansho.
Tababarka-tababarka dadka kale sida-inay u dhaqaaqdo.
Orientation-dadaal Service isku dayaya in ay ka heli habab si ay u caawiyaan dadka waawayn.
Complex Lagu Xallinayo Dhibaatada-Go'aaminta diiddani sare iyo dib u xogta ku xiran qiimeeyo iyo in la soo saaro fursadaha iyo hirgelinta dawayn.
Nidaamka Qiimaynta-barashada shuruudaha item iyo waxay u baahan tahay in la sameeyo qaabka a.
Technology Design-Dhalinta ama qabsado marsho iyo injineernimada si ay u bixiyaan rabitaanka shakhsiga.
Tools Selection-Aqoonsiga nooca qalabka iyo qalab u baahnaa si ay hawshan u ah.
qalabka Rakibaadda-xiridda, alaabta, fiilooyin, ama ay qorshaynayso in ay kor u kulmaan caddaymaha.
Barnaamij-curinta codsiyada computer sababo jira oo kala duwan.
Hawlgallada cabirrada Monitoring-kuurgalo, burooyinkoodii, ama calaamado kale si loo hubiyo in mashiin sax ah oo shaqeeya.
Hawlgallada iyo hawlgallada Maamul-Maamulka habab ama qalabka.
Dayactirka-Sameynta daryeelka joogtada ah oo ku saabsan qalabka iyo go'aaminta marka.
sababaha khaladaad shaqada iyo go'aaminta sida in la sii wado oo ku saabsan mid ka dhib-Go'aansiga.
barnaamijyada ama lagu daydo isticmaalka qalabka loo baahan yahay dayactirka-Daboolid.
baaritaanada iyo jeegaga waxyaabaha Quality Control Research-Bandhigyada, adeegyada, ama geeddi inuu xukumo shaqeynta ama aad u fiican.
Talada iyo go'aan-qaadasho-Qaadashada tixgelin lacagta u dhigma iyo waxyaalo waaweyn oo ku saabsan dhaqanka tahay in la helo mid ka mid ah ugu habboon.
Systems Falanqaynta-Go'aaminta sida barnaamij u shaqeeyaan waa iyo sida hagaajin ee ganacsiga, xaaladaha, iyo jawiga saamayn ku yeelan kara natiijooyinka.
Systems Falanqaynta-Go'aaminta tallaabooyinka ama tilmaamayaasha waxqabadka iyo sidoo kale hawlaha loo baahan yahay si dhab ah si kor loogu qaado waxtarka ama sax ah, iyadoo la raacayo ujeedooyinka nidaamka.
dadka kale Timemanagement-Maaraynta’ muddada iyo waqtiga oneis u gaar ah.
Maamulka Savings-Aqoonsiga sida dakhliga lagu maal-doontaa in shaqo oo dhamaystiran, iyo iibka lacagta kuwan.
Kormeerka Waxyaabaha Resources-Helitaanka iyo logu dhinaca isticmaalka habboon ee shirkadaha, qalabka, iyo khayraadka si dhab ah loo baahan yahay in shaqo gaar ah u sameeyaan.
Kormeerka Shaqaalaha Resources-Sameynta riixaya, iyo dadka keentay halka ay iyagu qabtaan, pinpointing dadka ugu fiican ee shaqo in.
Shuruudaha Waxbarashada Need aqoonta
Diploma Senior School (ama GED ama Senior High School isu Qualification)
In ka yar Heerka School Top
Link ee Lacagta (ama kale stage 2-sanno)
Ilaa iyo ay ka mid yihiin afar toddobaad
Career Command Skills Qualification
Adkaysi – 82.50%
dadaal – 79.37%
Authority – 83.29%
Iskaashiga – 90.57%
Dhibaatada la xidhiidha Qaar kale – 80.35%
Sinaanta Bulshada – 86.47%
Is Control – 83.97%
gaynta Stress – 79.92%
hallayn – 90.64%
Focus on Qoto – 84.62%
daacadnimo – 81.21%
Freedom – 78.46%
Adoo ka fakaraya Analytical – 70.28%